where is the justice? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » where is the justice?
Posted by ပူတူးတူးလေး on Sep 21, 2010 in Society & Lifestyle |6comments
ဒီ post လေးကတော့ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယမြောက် post လေးပေါ့။ ဒီ post လေးမရေးခင်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခဏလေးမိတ်ဆက်ချင်တယ် အားလုံးကို။ အခုဒီ Post လေးကိုရေးတဲ့ laptop ကို အစ်ကို ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့နေ့က “ညီမလေး ဘာလို့ အဲဒီမှာ အချိန်ဖြုန်းနေတာလဲတဲ့ အမြန်ဆုံးလာခဲ့ဖို့အကိုမျှော်လင့်တယ်” ဆိုပြီးအစ်ကိုဖြစ်သူက ညီမကို စိတ်ပျက်စွာနဲ့သူဆီကိုအမြန်လာစေချင်တယ်သဘောနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့ကဘဲကျွန်မ အစ်ကို့ဆီကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။ “အစ်ကိုကျွန်မဒီမှာနေအုံးမယ် ဖြစ်နိုင်ရင် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ပြီးမှ လာခဲ့မယ် ကျွန်မရဲ့ researchတွေအားလုံးပြီးတော့မယ်လို့” ။ ဘာတွေ research လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်မပြောပြပါ့မယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဗမာပြည်ရဲ့အစိုးရရော အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကဝန်ထမ်းတွေရော မတရားမှုတွေလုပ်နေတာတွေပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကလူတွေက မတရားအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ထိုင်ဆဲတယ် ဒါကိုလက်ခံတယ် ဒါပေမယ့် ဆဲနေတဲ့လူတွေ ကိုယ်တိုင် မတရားတာလုပ်နေကျတယ်လို့ကျွန်မဆိုရင်လက်ခံကျမလား၊ ဥပမာဆိုပါတော့ ဟိုတစ်နေ့ကျွန်မမီတာသွားဆောင်တယ် မီတာ ကျတာ ၃၇၈၅ ကျပ် ကျွန်မပေးလိုက်တာ ၄၀၀၀ အဲဒီတော့ သူမက ၁၂၅ကျပ်ပြန်အမ်းရမယ် အဲဒါကိုစောင့်နေတဲ့ကျွန်မ ကိုသူ ကဘာပြောလဲဆိုတော့ “မီတာစာရွက် ဟိုဘက်ကနေပြန်စောင့်ယူရမှာ ” အဲဒီတော့ ကျွန်မက “မဟုတ်ဘူးအကြွေအမ်းတာကိုစောင့်နေတာလို့ ” ဒါနဲ့ သူမက”အော်အကြွေမရှိလို့ အဲဒီ့လောက်တိကျနေရင် အတိအကျယူခဲ့တဲ့”။ အဲဒါမျိုးဖြစ်နေတာကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း ဆီက အနဲဆုံး ၅၀ ၁၀၀ ရမယ်သူတို့။ ၅၀ဘဲထားပါအုံး ၁၀ယောက်ဆိုရင် ၅၀၀ တစ်နေ့ကို အယောက်တစ်ရာလာဆောင်ရင် ၅၀၀၀ ရမယ် ဒါသူတို့ ဝန်ထမ်းတွေ ရဲ့ outside ငွေလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူလဲယူသေးတယ် ပြီးရင် ပုံစံက လူတွေကို ပြန်ဆဲချင်တဲ့ရုပ်နဲ့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံပြန်တောင်းတဲ့လူကိုတောင် ၁၂၅ကျပ်နဲ့ကပ်နေတယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တာ။ တစ်ကယ်က သုက ၁၂၅ကျပ် နဲ့ရပ်တည်နေတာ။ လူအများကြီးဆီကဆိုတော့ကိုက်တာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း စပယ်ယာတွေမှာ အကြွေမရှိတဲ့ကိစ္စ အခု အထူးကား ၂၀၀ ကားတွေစီးရင်များသောအားဖြင့်တော့ အကြွေမ၇ှိတာနဲ့ ၅၀၀ ပေးလိုက်ရင် ၃၀၀ပါသွားတယ်။ ကြုံလို့ ဟိုတစ်နေ့ က passport သွားထုတ်တာ sing လဲထိုးပြီးရော ဝန်ထမ်းက ၁၀၀၀ တဲ့” ဘာလို့လဲဆိုတော့” “အားလုံးပေးရတယ်တဲ”့။ အဆန်းဘဲနော်။ ဒါမျိုးမတရားမှုတွေကို အစိုးရ ဆီမှာတင်မကဘူး ပြည်သူတွေဆီမှာလဲအများကြီးတွေ့၇တယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်မတရားတာလုပ်နေမှ တော့ မတရားတာတွေဘဲခံ၇မှာပေါ့။ ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းရှိလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ကျွန်မအစ်ကို ကို ပြောနေတဲ့ researchဆိုတာ ကျွန်မ ဟိုရောက်ရင် ကြိုးစားပြီးထုတ်မယ့် ကျွန်မရဲ့စာအုပ်အတွက်ပါ။ ဗမာပြည်ရဲ့မတရားမှုတွေအကြောင်းပေါ့။
လုပ်စမ်းပါ ဒါမျိုးလေးတွေ ရေးစမ်းပါ အားပေးပါတယ်။ ဒီကလူတွေကလည်း နအဖ ကို သဘောမကျပါဘူး..။ သူတို့ရဲ မတရားမှုတွေကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။
ဒါနဲ့ ဒီက ညီမက အခုမှ မြန်မာပြည်ပြန်လာတာထင်တယ် ဒါမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ကလူတွေကြုံနေကျဆိုတော့ မဆန်းတော့ပါဘူး..။ ဒီလို ကိစ္စတွေ ဒီမှာပပြောက်သွားဖို့
ကတော့ နောက် အနှစ် 50 လောက် ပြုပြင်ယူမှရမယ်ထင်တယ်..။ စစ် အဆိုး(စိုး)ရ ပေးခဲ့တဲ့ အမွေဆိုးကြီးပဲဆိုပါတော့
ကို R GA ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမွေဆိုးကြီးက ပြည်သူတွေမှာစိမ့်ဝင်သွားမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိတယ်။ သူတော်များများလဲစိမ့်ဝင်နေပါပြီ။ အဲဒါတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အဆိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ မတရားမှုတွေများလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ရပ်တွေလုပ်ခြင်းဟာ ကြာတော့အမှန်ဖြစ်လာမယ်။ မလုပ်တဲ့လူတွေတောင် ငကြောင်ဆိုပြီးကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာ။
မင်းသားကြီးကျော်ဆွေ ပါဝင်ရိုက်ကူးတဲ့ လက်ဦးဆရာ ဇာတ်ကားကလိုပေါ့ လူငယ်ဘ၀သူများပစ္စည်းလိုချင်လို့ခိုးရော
အမေကမဆူဘဲ ဖွက်ပေးတယ် အားပေးအားမြောက်လုပ်တယ် နောက်ဆုံး လူကြီးဖြစ်တော့သူခိုးကြီးဖြစ်ရော
အခုလဲဒီလိုပါဘဲ ၀န်းထမ်းတွေလုပ်နေတာသိတယ် ဘာမှအေ၇းမယူဘူး ဒါအားပေးအားမြောက်လုပ်တာပါဘဲ
သူတို့က၀န်ထမ်းတိုင်းကိုလုပ်စေချင်တာ ဒါမှလိုတဲ့အချိန်မှာကိုင်လို့ရမယ်လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
လူကြီးတယောက် ပြောတာကြားဘူးပါတယ်။ အစိုးရက ဝန်ထမ်းတွေကို လခပေးချင်ယောင်ဆောင်တယ်၊ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း အလုပ်လုပ်ချင်ယောင် ဆောင်ကြတယ်။ အစိုးရက ပြည်သူလူထုကို အုပ်ချုပ်ချင်ယောင်ဆောင်တယ်၊ ဒီတော့ လူထုကလည်း အခွန်ပေးချင်ယောင်ဆောင်ကြပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာ လည်နေတော့တာပဲ။
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သမာသမတ်ကျတဲ့ တရားစီရင်ရေးသာ ရှိပါစေဗျာ။ အဲဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေ ပျောက်ကို ပျောက်ကွယ်ရမှာပါ။ မတရား အလုပ်ခံရတဲ့ လူတွေက ဘယ်သူမှ မကျေနပ်ပါဘူး။ ဘာမှ ပြန်လုပ်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေမို့ ငြိမ်ခံနေရတာပါ။
မီတာရုံးမှာမှ မဟုတ်ဘူး . . . ဖုန်းရုံးမှာလည်း အဲ့ဒီလိုပဲ . . .